Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi: မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၀ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 70th day of 900 miles for Long March
Our hunger strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi begins September 18th.
The Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi will be outside the UN everyday till September 27th from 9AM - 6PM.
Our9day hunger strike will begin on September 18th, the 21st anniversary of the bloody military coup in Burma.
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၀ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 70th day of 900 miles for Long March
ခရီးရှည်ချီတက်ခြင်း (၇ဝ) ရက်မြောက်
သြဂုတ်လ (၁၅) ရက်၊ ၂ဝဝ၉
နံနက် (၉) နာရီ (၃၅) တွင် ၁၆၂ လမ်းမပေါ်မှ စတင်ချီတက်သည်။ ယနေ့အားဖြည့်လမ်းလျှောက်ရဲဘော်များမှာ ယူတီကာမြို့မှ ရဲဘ်ာအောင်သိန်းခိုင်၊ ရဲဘော်စိုးစိုးခိုင်၊ ရဲဘော်သာစံကျော်၊ ရဲဘော်ဇော်ဇော်တို့ဖြစ်သည်။ ယူတီကာမြို့ ရွှေဝါရောင်မဂ္ဂင်ကျောင်းတွင် တည်းခိုနေရာမှ ယနေ့တွင် အော်လ်ဘနီမြို့တွင် စတည်းချမည် ဖြစ်သောကြောင့် ရဲဘော်ရဲဘက်များကလိုက်လံပို့ဆောင်ခြင်းလည်း တကြောင်းမည်ပါသည်။
စလျှောက်ပြီးသည်နှင့် Town of Carlisle သို့ ဝင်ရောက်သည်။ Schovaire County ဖြစ်ပါသည်။ သိပ် မကြာခင်တွင် Town of Esperance သို့ရောက်ရှိ၏။ (၁ဝ) နာရီ (၂ဝ) မိနစ်တွင် Sloansville သို့ ဝင်ရောက်ပြန်၏။ ဗတာင်ကုန်းတောင်ဆင်းလမ်းများဖြင့် အတိပြီးသောနယ်မြေဖြစ်ပါ၏။ အခုတလောတွင် ကျွန်ုပ်တို့ခရီးရှည်အဖွဲ့သည် တောင်ကုန်းများကိုချည်း တက်နေရသည်ဖြစ်၏။ (၁ဝ) နာရီ (၂၅) မိနစ်တွင် လမ်းဆုံလမ်းခွရှိ မီးပွိုင့်တခုအနီးတွင် ခဏနားကြသည်။
နားပြီးသော်ဆက်လက်ချီတက်ကြ၏။ ဤရွာကလေးသည် ခရီးဝေးလမ်းမပေါ်ရှိ စပ်ကူးမတ်ကူးရွာကလေးဟု ခေါ်ဆိုသော် ရနိုင်၏။ အနည်းငယ်စည်ကားမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကားအသွားအလာအလွန်များပြားပါ၏။ လမ်းပေါ်တွင်ဖြတ်သန်းသွားကြသော ကားများ၊ ဆိုင်ကယ်များမှ အားပေးနှုတ်ဆက်မှုများကို တွေ့ရသည်။
နေသည်အလွန်ပူလာ၏။ (၁၁) နာရီ (၃၅) မိနစ်တွင် Village of Esperance သို့ ဝင်ရောက်သည်။ ရွာအဝင်သည် အလွန်ခန့်၏။ အိမ်တန်းလေးနှင့်၊ ခြံနှင့်ဝင်းနှင့် သစ်ရိပ်နှင့် လှလှပပရှိ၏။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုသို့သောအဖြစ်ကိုရရန် လောလောဆယ်တိုက်ပွဲဝင်နေကြ၏။ နေပူသည်ဖြစ်စေ၊ မိုးရွာသည်ဖြစ်စေ လျှောက်ကြရမည်မှာ အမှန်ဖြစ်၏။
ရွာသို့အဝင်တွင်Lord North လမ်းအတိုင်းဝင်ပြီး၊ မကြာခင်တွင်ပင် Main St ကိုလွန်သော် (၁၁) နာရီ၊ (၄ဝ) မိနစ်တွင် ခဏနားကြသည်။ ရဲဘော်ဇော်ဇော်ဖန်တီးလာသော နေ့လည်စာကို အဆာပြေစားကြသည်။ ထိုနောက်ဆက်လက်ချီတက်ရာ နေ့လည် (၁၂) နာရီတွင် Town of Duanesburg သို့ရောက်ရှိ၏။
နေပူပူတွင်ဇွဲဖြင့်ချီတက်ကြ၏။ Schenectady County ကို ကျော်ပြီးသော် တောင်ကုန်းသက်သက်ကိုသာတွေ့ရ တော့၏။ ရှည်လျားသော၊ မြင့်မားသော ကုန်းကြောကိုတက်ရ၏။ နေကလည်းပူသထက်ပူလာပါသည်။ ချွေးဒီးဒီးကျ၏။ ပန်းလှသဖြင့် တမိုင်ခန့်ကျန်ချိန်တွင် သစ်ပင်ရိပ်တခု၌ခဏနားကြ၏။ ထို့နောက် ဆက်လက် ချီတက်သော် ဝေးကွာနေသောရှေ့အစုနှင့် နောက်အစုသည် တညီတညွတ်တည်းပြန်လည်ပေါင်းဆုံကြ၏။ မွန်းလွဲ (၁) နာရီ (၂ဝ) မိနစ်တွင် ဤနေ့အတွက်ပြီးဆုံးပါလေ၏။
Posted by Long Marech for freedom at 4:05 PM
Labels: Long March
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၈၅ ရက်မြောက်ခရီး 85th day of 90...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၈၄ ရက်မြောက်ခရီး 84th day of 90...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၈၃ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 83th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၈၂ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 82nd day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၈၁ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 81st day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၈၀ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 80th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၉ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 79th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၈ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 78th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၇ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 77th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၆ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 76th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၅ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 75th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၄ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 74th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၂ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 72nd day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၁ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 71st day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၇၀ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 70th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၉ ရက်မြောက်နေ့ ခရီး 69th day o...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၈ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 68th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၇ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 67th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၆ ရက်မြောက်နေ့ ခရီး 66th day o...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၅ ရက်နေ့မြောက် ခရီး 65th day o...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၄ ရက်မြောက်နေ့ နှင့် ရှစ်လေးလံ...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၃ ရက်မြောက်နေ့ ခရီး 63rd day o...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၂ ရက်မြောက်နေ့ ခရီး 62nd day o...
၂၁ နှစ်မြောက် (၈၈၈၈) ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံနေ့ြေ...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၁ ရက်မြောက်ခရီး 61st day of 90...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၆၀ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 60th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၅၉ ရက်မြောက်နေ့ ခရီး 59th day o...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၅၈ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 58th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၅၇ ရက်မြောက်နေ့ခရီး 57th day of...
မိုင် ၉၀၀ ခရီးစဉ်၏ ၅၆ ရက်မြောက်ခရီး 56th day of 90...
Long Marech for freedom
Media Contact person ဆက်သွယ်ရန်
Maung Maung Tate, 330-622-3530
Signature Campaign for FREE BURMA AND DAW AUNG SAN SU KYI
မစ္စတာ ဘန်ကီမွန်းထံ တင်သွင်းမည့် Signature Campaign
Track No01.mp4 -
THE FATHER OF INDEPENDENCE
If you want to donate to our cause အလှုငွေများ ပါဝင်လှုဒါန်း လိုပါက
Min Sun Min
Account # 119-305-2901
Routing # 226-070-584 Apple Bank
Name: Min Sun Min
Address: 912 E. 15th Street
Long March and Hunger Strike for Free Burma and Daw Aung San Suu Kyi on Facebook
ပြောဆို ဆွေးနွေး သွားကြပါ
မိုင် ၉၀၀ ချီတက်နေသည့် တိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်များ
ရဲဘော်၊ မင်းရွှေဦး (ခေါ်) ချစ်လွန်းသူ အဖဦးသန်းရွှေ (မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး) တပ်ရင်း (၂၀၈) (ABSDF) ရဲဘော်ဟောင်းနှင့် အမိဒေါ်စိန်စိန်တို့၏ သားဦး၊ မွန်ပြည်နယ် သထုံမြို့တွင် ဇွန်လ၊ ၂၇ ရက်၊ ၁၉၈၅ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
ရဲဘော် ကဘောယူသည် အသက် ၂၂ သာ ရှိပြီး ဖခင်မှာ လက်ရှိ တော်လှန်ရေး တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နေဆဲပါ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်မြို့တွင် မွေးဖွားပြီး ငယ်စဉ်ကပင် မဲလ refugee စခန်းထဲတွင် ကြီးပြင်းခဲ့ပါတယ်၊ ယခုအခါ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု Tenneesee ပြည်နယ်တွင် အခြေချ နေထိုင်လျှက် ရှိပါသည်။
ရဲဘော်၊ ကျော်ရှိန် အသက် ၅၇ နှစ် ရဲဘော်ကျော်ရှိန်သည် တနင်္သာရီတိုင်း ပုလောမြို့ မှ ဖြစ်ပြီး၊ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦး (ABSDF) တပ်ရင်း (၂၀၁) သို့ ၀င်ရောက်လာပြီး တပ်ကြပ်တာဝန်အထိ ထမ်းဆောင်ကာ အမိမြေ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ယနေ့ထိတိုင်အောင် ကြိုးပမ်းနေဆဲပါ။
၈၈၈၈ လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကြီးတွင်၊ ပုလောမြို့  နယ်လုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂ၌ ပါဝင်လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ် တပ်ဦးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ခရီးရှည် ချီတက်ခြင်းများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
အသက် ၅၅ နှစ် ၁၉၈၈ ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကြီးတွင် မော်လမြိုင်မြို့ အမှတ် (၁) နယ်မြေကို ဦးဆောင်၍ စတင်သပိတ်မှောက်ခဲ့၊ ၁၉၉၀ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ် တွင် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဖို့ဝိန်းမြို့ သို့ အခြေချနေထိုင်ရန် ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၁၉၅၆ တွင် မော်လမြိုင်မြို့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။ ရှေ့ နေ လုပ်ငန်းဖြစ် အသက်မွေးခဲ့သည်။ ၁၉၈၈ ၈လေးလုံး အရေးတော်ပုံ ကြီးတွင် မော်လမြိုင်မြို့ ရှေ့နေများ အသင်းတွင် ပါဝင်၍ လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၁၉၈၉ တွင် NLD ပါတီတွင် ပါတီဝင် အဖြစ်ဝင်ရောက် လှုပ်ရှားခဲ့သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Utah ပြည်နယ်သို့ အခြေချနေထိုင်ရန် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ဤဘလောဂ့်တွင် ရှိသော ဓါတ်ပုံများနှင့် အကြောင်းအရာများကို အများပြည်သူအတွက် ဝေမျှရန် ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် ဤ ဘလောဂ့်မှ ဓါတ်ပုံများနှင့် သတင်းအချက်အလက်များကို လိုအပ်၍ အသုံးပြုချင်ပါက ဤဘလောဂ့်၏ လင့်ခ်အား ချိတ်ဆက်၍ ဖေါ်ပြပေးပါရန် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။
ဤဘလောဂ့်နှင့် ဆက်သွယ်လိုပါက အောက်ပါ အီးမေးလ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှု တိုက်ပွဲဝင် ကော်မတီ (USA)
သတင်းဌာနများနှင့် သွားသင့်သော ၀က်ဘ်များ